Real Steel Boxing Champions APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » ရီးရဲလ်သံမဏိလက်ဝှေ့ချန်ပီယံ
ရီးရဲလ်သံမဏိလက်ဝှေ့ချန်ပီယံ APK ကို
ဒီအဆုံးစွန်အရေးယူမှုနှင့်အားကစားစွန့်စားမှု၌သင်တို့၏စက်ရုပ်တိုက်ပွဲများစက်ကိုတည်ဆောက်စေ။ အထူးရွေ့လျားသုံးပြီးတဦးတည်းတိုက်ခိုက်ရေး, jabs, သင့်အကြိုက်ဆုံးသူရဲကောင်းများ Atom, ဇု, Midas, NoisyBoy နှင့်အသစ်စူပါစတား Atom ချုပ်၏ဒဏ္ဍာရီအစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူလာကြတယ်အတွက်ပြင်းထန်သောတိုက်ခိုက်မှုများတိုက်ဖျက်မည်။
ထူးခြားတဲ့စက်ရုပ် 1000s အတူလက်ဝှေ့ဘုံထဲမှာစစ်တိုက်နှင့်ဤမော်ကွန်းနောက်ဆက်တွဲအတွက်ရီနာကှငျးဖှယျ 10 လွှမ်းမိုး။ အဆိုပါအငြင်းပွားဖွယ်မရှိချန်ပီယံအဖြစ်အဓိပတိစိုးမှသစ်ရီးရဲလ်သံမဏိခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ် & အနေနဲ့အားလုံးနယူး Mystery စူပါသူဌေးက၏ Legends အနိုင်ယူ!
1500 သီးသန့်စက်ရုပ်၏ 32 + ဧရာစက်ရုပ်အစိတ်အပိုင်းများမှသင်၏ထူးခြားသောဝိသေသလက္ခဏာတိုက်ဖျက်မည်။ အထင်ကရခေါင်းဆောင်များ, ကြီးမားတဲ့ကိုယ်ထည်နှင့်အစွမ်းထက်လက်စွဲ & ခြေအနေဖြင့်ရွေးချယ်ပါ။ သင့်ရဲ့စတိုင်အတုယူကြောင်းစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Paint, မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်သင်၏စက်ရုပ် Customize နှင့်ရီးရဲလ်သံမဏိချန်ပီယံလိဂ်၏ရှင်ဘုရင်သည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားအဖြစ်ချီးကျူးခံရဖို့သင့်ရဲ့ထူးခြားတဲ့အမည်ကြေညာ!
သင့်ရဲ့အနိုင်ဂိုးမဟာဗျူဟာအဘို့အကြီးကျယ်ပြင်းထန်သော & အထူးတိုက်ခိုက်မှုများ, Ultimate အဆင့်မြှင့်တင်ဝေဖန် Hits နှင့် Finish ကို Select လုပ်ပါ။
ရီးရဲလ်သံမဏိ Legends ၏ကိုယ်ပိုင်တစ်ဦးကတန်းစီဇယား - Atom, ဇု, ဆူညံ Boy, Midas & Metro & ဟာချန်ပီယံရှစ်အတွေ့အကြုံကို relive ။
•အဆိုပါပြိုင်ပွဲများတွင် 25 Indomitable Boss အပါအဝင်5တိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူ
• 30 တန်ခိုးကြီးသောစိန်ခေါ်မှုများတစ်ဖက်မှာ
• 120 အချိန်တိုက်ခိုက်မှုတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူစံချိန်အချိန်အတွက်အတိုက်အခံဟာ Off Rip
•ထိုအ Unlimited အခမဲ့ Sparring နှင့်သင်၏ကျွမ်းကျင်မှု hone
ဒီဂိမ်းကို download လုပ်ပါနှင့်ကစားရန်လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အချို့ဂိမ်းပါဝါ-ups ဂိမ်းအတွင်းအမှန်တကယ်ငွေနှင့်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏စတိုးဆိုင်ရဲ့ setting တွင် In-app ကိုဝယ်ယူမှုကန့်သတ်ရန်နိုင်ပါတယ်။
- ACCESS_FINE_LOCATION: ဒေသအခြေစိုက်ကမ်းလှမ်းမှုအဘို့အသင့်တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်ရန်။
- READ_EXTERNAL_STORAGE: သင်၏ဂိမ်းဒေတာ & တိုးတက်မှုချွေသည်။
- WRITE_EXTERNAL_STORAGE: သင်၏ဂိမ်းဒေတာ & တိုးတက်မှုချွေတာသည်
* ဒါ့အပြင်တက်ဘလက် device များအတွက် optimized
ကျွန်တော်တို့ကို Watch: http://www.youtube.com/reliancegames
355.09 ကို MB
Reliance Big Entertainment က (ဗြိတိန်) ပုဂ္ဂလိကလီမိတက်